ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Audbos DB-01, ယူရို ၄၉.၉၉ အတွက်ရောင်းချသောအရည်အသွေးမြင့်နားကြပ်များ။ Androidsis
ဒီတစ်ခါတော့မင်းကိုငါယူလာမယ် နားကြပ်အချို့ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ Audbos DB-01 စျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ Amazon မှာရှာတွေ့နိုင်တာပေါ့ သူတို့ရဲ့မူလစျေးနှုန်း၏ 16% အားဖြင့်လျှော့ချနှင့်ယူရို ၅၀ အတွက်သာဖြစ်သည်။ အထူးသ 49,99 ယူရိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအရည်အသွေးကောင်းချောများနှင့်နားကြပ်နှင့်ထိုက်တန်သည့်အသံကိုပေးပြီး၎င်းကိုစျေးနှုန်းနှစ်ဆအထိပေးသည်။
နားကြပ်ကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူး Audbos DB-01အချို့ နားကြပ်များတွင်ဝါယာကြိုး ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစမ်းသပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးဤပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်များဖြစ်သည်မှာအစတွင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်သစ်သားအရောင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိခြင်းမရှိသော်လည်းတစ်ချိန်ကသေတ္တာထဲမှထုတ်။ ငါ့လက်၌ရှိသည် ၎င်းသည်နားကြပ်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
1 Audbos DB-01 ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အပြီးသတ်
2 Audbos DB-01 ၏အသံအရည်အသွေး
3 Amazon တွင် Audbos DB-01 ကိုဝယ်ပါ
4 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Audbos DB-01
Audbos DB-01 ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အပြီးသတ်
ဤအဒီဇိုင်းနှင့်ချောနှင့်စပ်လျဉ်း နားထောင့်နားကြပ် Audbos DB-01, ငါ့အကြိုက်ဆုံးကဘာလဲ, ယုတ္တိယုတ္တိဘယ်လောက်မှလွဲ။ စူပါအစွမ်းထက်နှင့်မျှတသောအသံ အသံနှင့်အသံမြည်သည့်အသံနှင့်အသံမြည်သည့်နေရာတွင်သစ်သားအရောင်နှင့်လှပသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့်အမေဇုန်စတိုးဆိုင်ရှိဓာတ်ပုံကိုသူတို့မြင်သောအခါငါ့ကိုပြန်ပစ်လိုက်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုထုတ်ယူခဲ့သည် ငါ့ကိုပေးတော်မူသောစှဲ box ကိုအလွန်, အလွန်သာယာသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ရန်အဖြစ် ထုတ်ကုန်၏တင်ဆက်မှုအမှန်တရားကစံနမူနာဖြစ်ပါတယ် ငါပို့စ်ရဲ့အစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့တာဒီဗွီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း၊ ဒီ Audbos DB-01 ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းရိုးရှင်းတဲ့လေးထောင့်ကွက်ထဲမှာလာပြီးခေတ်မီတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ငါတို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတွေ့နိုင်တယ်။ အတွင်းပိုင်းတင်ဆက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းကိုရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်စေသည်။
box ထဲမှာကျွန်တော်ရှာပါမယ် အလွန်လှပပြီးခေတ်မီသောအနက်ရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလွယ်ကူသောအိတ် Audbos တံဆိပ်၏တံဆိပ်ကိုသာတွေ့နိုင်သည်။
အလားတူပဲငါတို့ရှာပါ အစားထိုးနားကြပ်၏4အားလုံးအတွက် တိုင်းတာမှုများနှင့်အတူအသုံးပြုသူအားလုံး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အမျိုးမျိုးသော halo အရွယ်အစား၏ S, M နှင့် L.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့တွေ့ဆုံရန် Audbos DB-01အဆိုပါ နားကြပ်ထဲမှာ သူတို့မှာထိုကဲ့သို့သောထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပြီးသစ်သားအရောင်ချောတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်သူတို့ကိုသင့်လက်ထဲထည့်ပြီးတာနဲ့သူကအရမ်း၊ အရမ်းကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။
Audbos DB-01 နားကြပ်၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ကိုချက်ချင်းလက်ထဲသွင်းလိုက်သည်နှင့်၎င်းသည် high-end ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်သည်။ ၎င်း၏ပါးလွှာသော်လည်းခံနိုင်ရည်ရှိသောကေဘယ်ကြိုး၊ အလူမီနီယံအချောများနှင့်သစ်သားချောများအထိပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကြည့်ကောင်းသည်ကိုသင်မြင်နိုင်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Audbos DB-01 ၏အသံအရည်အသွေး
ဤ Audbos DB-01 ၏အသံအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို၎င်းတို့တွင်ရှိသကဲ့သို့ထည့်သွင်းနိုင်သည် Dual Driver ပါ ၀ င်သည့် Dual Driver နှင့် Dynamic Daphragm ပါ ၀ င်ပြီး၎င်း၏ frame နှင့်ပေါင်းစပ်။ အသံအတွေ့အကြုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည် အနိမ့်အမြင့်နှင့်အလယ်အလတ်အဆင့်မြင့်သောခွဲခြားမှုဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဂီတနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိသေးသောထူးခြားချက်အသစ်များကိုသင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအသံဖြင့်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဲဒါအစား၊ ငါလိုဖြစ်လာမယ်၊ မင်းငါ့ကိုတရုတ်လိုအသံမျိုးဖြစ်ပေမဲ့၊ ငါဒီသုံးသပ်ချက်ကိုအဆုံးသတ်ချင်တယ်၊ အကယ်လို့သင်ဟာယူရို ၃၀ ထက်မပိုတဲ့နားကြပ်နားကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်၊ ဤ Audbos DB-01 သည်ကောင်းကင်ဂီတကဲ့သို့မြည်လိမ့်မည် ထူးခြားချက်တစ်ခုနှင့်အသံအရည်အသွေး၊ ထူးခြားချက်များ၊ စသည်တို့ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ လာကြ၊ သူတို့ကသေတာနဲ့တူတယ်။.
Amazon တွင် Audbos DB-01 ကိုဝယ်ပါ
သငျသညျလိုလျှင် သာ 01 ယူရိုအဘို့ဤ Audbos DB-49,99 ကိုဝယ်ကြလော့သင်ရုံရန်ရှိသည် Amazon ကိုသီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုသို့ပို့ဆောင်ပေးမည့် link တစ်ခုတည်းကိုနှိပ်ပါ.
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Audbos DB-01
အာရုံခံ 100 dB / mW
imppedance 16 Ω
ကြိုးအရှည် ၁.၂ မီတာ / ၃.၉ ပေ
ဂျက် connector ကို 3.5mm ငွေကိုဖြောင့်ချထားတဲ့
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါဝါ3MW
အများဆုံးပါဝါ 10 MW
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Audbos DB-01၊ ယူရို ၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသောအရည်အသွေးမြင့်နားကြပ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
Samsung Pay ကိုယူကေတွင်စတင်မိတ်ဆက်တော့မည်